Iti eluhlaza ityibilika kwaye ikhawulezisa imetabolism Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kunencasa okrakra kancinci, kodwa isayensi sele ibonakalisile ukuba inani lezibonelelo iti eluhlaza enokuyenza kwimpilo yakho kufanelekile ukuba ungayamkeli.
I-Detoxifying, disinfects, ikhawulezisa imetabolism kwaye itshise amanqatha. Ukongeza, eyona iti ithethwayo ngalo mzuzu inamanye amandla ekuxhaseni impilo nasekuchaseni ukutyeba kakhulu. Fumanisa ngakumbi ngesi siselo kwaye usibeke njani kubomi bakho bemihla ngemihla.
1 Yintoni iti eluhlaza?
2 Isebenzela ntoni iti eluhlaza?
3 Izibonelelo zeti eluhlaza
3.1 Cofa phantsi
3.2 Kukhawulezisa imetabolism
3.3 Thintela isifo seswekile, icholesterol ephezulu, uxinzelelo lwegazi
3.4 Ukukhuthaza impilo-ntle kunye nokuphucula imeko yeemvakalelo
3.5 Inceda ukwetyisa
4 Iti eluhlaza iyangqinelana
5 Iti eluhlaza ngeapile kunye neminti
Yintoni iti eluhlaza?
Umthonyama kwisityalo seCamellia sinensis, njengamagqabi amnyama namhlophe, iti eluhlaza inamagqabi ayanyisiweyo kwaye yomiswe, ke ineempawu ezahlukeneyo. Oku kuthintela igcwala lezithako kunye nokugcina izondlo. Phakathi kwezo zithathwa kwimifuno, le yeyona iti ithandwayo eBrazil kwaye ibisisifundo esingaphezulu "kwabazalwana" bayo. Kuqikelelwa ukuba esi siselo sihambelana phakathi kwe-80 ne-90% yemveliso yeti yaseTshayina, indawo esizalwa kuyo ngoku el mundo.
Isebenzela ntoni iti eluhlaza?
Phambi kwakhe, amehlo ayakhanya, iti eluhlaza yaziwa njengempembelelo entle ekulweni iipawundi ezingaphezulu. Kodwa ngaba ngokwenene zinamandla kangako?
Iti eluhlaza inomsebenzi obalulekileyo wokulwa ne-antioxidant, enegalelo kuthintelo lwezifo zentliziyo, isifo seswekile kunye nomhlaza, umzekelo.
Izibonelelo zeti eluhlaza
Izibonelelo zeti eluhlaza ikakhulu ngenxa yokwakheka kwayo okunesityebi kwiipolyphenols, eziyimixube yendalo ekhoyo kwimifuno kunye nokukhuthaza ukuzikhusela komzimba. 'Imveliso ikwayanyaniswa nokwehlisa amanqanaba e-cholesterol kunye nokwenza ukuba amajoni omzimba asebenze. Ukongeza, le iti ikwanceda kulawulo lobunzima, ngenxa yeekatekini (uhlobo lwee-polyphenols) ezithi, ngokophando, zibangele iindlela zokuchaphazeleka ezichaphazelekayo ekuwohlokeni kwamafutha, kuxhomekeke kwidosi esetyenzisiweyo.
Iti eluhlaza ikhawulezisa imetabolism yakho, ebangela ukuba utshise amanqatha ngokukhawuleza.
IiCatechins zisebenzisana nee-receptors ze-leptin, ihomoni enxulumene nemvakalelo yokugcwala emzimbeni wethu, ikuthintele ekutyeni okungaphezulu koko kufunekayo emzimbeni wakho.
Thintela isifo seswekile, icholesterol ephezulu, uxinzelelo lwegazi
Uninzi lwecholesterol yethu luvela ekutyeni. I-EGCG ekhoyo kwiti iyanciphisa ukufunxwa kwesi sondlo emathunjini ethu.
Ukukhuthaza impilo-ntle kunye nokuphucula imeko yeemvakalelo
Kukho i-amino acid ekwiti eluhlaza ethi, xa ikhutshwe emzimbeni wethu, iye kwingqondo kwaye kukho ukonyuka kwemveliso yedopamine kunye ne-serotonin, ii-neurotransmitters ezinxulunyaniswe nemvakalelo yempilo-ntle.
Ukusebenza kweti eluhlaza kule nkqubo kwenzeka ngenxa yemixube ethile ye-bioactive equlethwe ekubunjweni kwayo, kwaye evuselela iintyatyambo zamathumbu.
Iti eluhlaza iyangqinelana
Xa isetyenziswa ngeedosi eziphezulu, iti eluhlaza inokuba yingozi. Isixa esikhulu seCaffeine sinokubangela ukulala, ngaphandle kokuthomalalisa iti, kwaye sikhokelele kwisifo sokuqaqanjelwa sisisu, ngokunyusa ukugcinwa kwesisu.
Ukugqitha ekutyeni okucetyiswayo kwe-600 ml nako kunokunciphisa ukufunxwa kwezondlo ezahlukeneyo ezifana ne-iron kunye ne-calcium, kwaye ukungabikho kwale yokugqibela kuyingozi kubafazi abanesifo sokuya exesheni. Ke ngoko, nokuba utya kuphela le mali, kubaluleke kakhulu ukuba ungaseli iti eluhlaza ngexesha lokutya.
Iti eluhlaza ngeapile kunye neminti
I-300 ml yamanzi abilayo
1 ibhegi yeti eluhlaza
I-4 i-sprigs yeminti entsha
100 ml ijusi yeapile engenaswekile
1 icephe lejusi yelamuni
Thela amanzi abilayo ngaphezulu kwengxowa yeti kwaye ubeke i-2 sprigs zetyeleba. Vumela ukupholisa ngaphambi kokufaka iapile kunye nejusi yeelamuni. Thatha ifriji kwaye ukhonze nge-2 sprigs zetyeleba.